Vita amin’ny fitaratra mangaraharaha ny varavaran’ilay trano fisainana na kabone miorina ao amin’ilay anjerimanontolo ao Androy. (Jereo Sary Tohiny)
Nindaosin'ny fahafatesana ny zoma 8 novambra 2019 teto Antananarivo ny Jeneraly Andriamandaminy Mohajy Ackram. Efa somary tsy dia salama fotoana lavalava izy, eo koa ny vesatry ny fahanterana. Teraka ny 04 septambra 1945, 74 taona izy izao nodimandry izao. Manamboninahitra ambony teo anivon’ny Tafika anabakabaka ny Jeneraly Mohajy Ackram. Efa nitana andraikitra ambony maro teto amin’ny firenena izy. Efa praiminisitra lefitra tamin’ny tetezamita notantanan’ny praiminisitra Ratsirahonana Norbert Lala izy. Efa Tale jeneralin’ny SECREN (Société d'Etudes, de Construction et de REparation Navales) ary efa Tale jeneralin’ny OMNIS (Office des Mines Nationales et des Industries Stratégiques) ihany koa.
Manatanteraka fihaonambe etsy amin’ny foibeny etsy Andraharo-Antananarivo ny antoko Hery Vaovao ho an’i Madagasikara (HVM) anio sabotsy 9 novambra 2019 tontolo andro. Manodidina ny 350 ireo mpizaika handray anjara amin’izany, ahitana ireo delege sy solontenan’ny antoko isam-paritra, tarihin’ny birao foibe. Tsy miatrika ity fihaonana ity ny filoha teo aloha Hery Rajaonarimampianina. Tsy hisy fanavaozana birao fa fandrindrana ny fiainan’ny antoko no hiompanan’ny lahadinika taorian’ny tsy nandraisan’ny HVM anjara tamin’ny fifidianana solombavam-bahoaka sy ny fifidianana kaominaly hatao amin’ny 27 novambra 2019.
Nandefa taratasy any amin’ny Fitsarana avo momba ny Lalampanorenana ny filohan’ny Antenimierandoholona, Rakotovao Rivo, mangataka ny heviny raha toa ka mifanaraka amin’ny Lalampanorenana na tsia ny didim-panjakana 2019-1866 tamin’ny 25 septambra 2019 mikasika ny Governora. Androany 08 novambra 2019 no voarakitra ao amin’ny firaketan’ny Fitsarana avo momba ny Lalampanorenana io taratasy fangatahana io.
Niharan’ny herisetra ny mpanohana an’i Penjy Randrianarisoa, Kandida Ben’ny tanàna Tiako i Madagasikara ao Ivato, Distrika Ambohidratrimo. Avy nametaka afisy no voalaza niharan’ny hetraketraka ka tapaka ny tanany. Tsaboina ao amin’ny hopitaly HJRA Ampefiloha izy amin’izao. (Jereo Sary Tohiny)
Nandriaka ny rà teto Antsohihy androany. Lehilahy iray nanao heloka bevava, namono olona, no voasambotry ny mpitandro ny filaminana tao Antsakabary, Distrikan’i Befandriana Avaratra. Nentina ampidirina am-ponja teto Antsohihy izy io, androany, no narahan’ny fianakavian’ny maty sy ny vatan-dehilahy anatin’ny dina Besaboha. Tsy nihambahamba ireto farany naka tamin-kery ilay voampanga, alohan’ny nidirana tao amin’ny fonja. Nokapain’izy ireo tamin’ny antsibe ka potika ny tanany, voafirafira ny tarehiny rehetra ka maty tsy tra-drano teo ambavahadin'ny fonja.
Hatao ao amin’ny CEDI, ampitan’ny Gymnase Soavita, ny fivoriana hamaritana ny naoty farany ambany hafahana fanadinana bakalôrea tamin’ny andiany manokana notanterahina ny 23 ka hatramin’ny 26 oktobra 2019 lasa teo. Miantso ireo lehiben’ny foibem-panadinana, ny talem-paritry ny fampianarana, ireo sefo Cisco ary ireo voakasik’ity fanadinana ity, ny fiadidian’ny oniversiten’i Toamasina hiatrika izany ny zoma amin’ny 3ora tolakandro.
Page 8 sur 490